Home Wararka AU oo guddi qiimeya CXD u soo dirtay Muqdisho! Afgaanistan oo cashar...
AU oo guddi qiimeya CXD u soo dirtay Muqdisho! Afgaanistan oo cashar laga bartay
Guddigan oo Midowga Afrika u qaabilsan Amniga iyo nabadgelyada Africa ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana kulamo ay maalmahan la qaadan doonaan Hay’adaha kala duwan ee Dowladda gaar ahaan kuwa amaanka si qiimeyn loogu sameeyo in Ciidanka SNA ay u diyaarsan yihiin in ay howlaha amaanka si buuxda ugala wareegaan AMISOM.
Warbixin dhawaan kasoo baxday Midowga Afrika ayaa lagu qeexay in weli Ciidanka AMISOM ay muhiin u yihiin sii joogista Soomaaliya ayna xiligan Ciidanka Xoogga Dalka u diyaarsanayn in ay howlaha amni kala wareegaan AMISOM hase ahaatee Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan seyrtay warbixintaasi.
Ciidamada AMISOM ayaa dhaqaale badan ku hela joogitaanka Soomaaliya, waxaana horaantii sanadkan muddo hal sano ah loogu kordhiyay howlgalka ay ku joogaan dalka.